Mid-range ဖုန်းတွေအတွက် ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ PUBG Mobile Lite – DigitalTimes.com.mm
1924 Shares 4972 Views
ဒီတစ်ပတ် TGIF အတွက်က ဘာလေးဖြစ်မယ်ထင်လဲ?? 樂樂樂
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းသမားတွေ Mid-range ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေ ပျော်သွားစေနိုင်လောက်တဲ့ သတင်းလေးတစ်ခုပါလာပါပြီ။
အခုချိန်အနေနဲ့ကြည့်ရင် Fortnite Android ကိုမျှော်နေတဲ့သူတွေ မနည်းမနောရှိမှာပါ။ အဲထဲကမှ Galaxy ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ ကံထူးရှင်တွေပေါ့။ သူနဲ့အပြိုင် PUBG ကတော့ Android ရော iOS အတွက်ရောထွက်ပြီးသားဖြစ်တော့ Android သမားတွေနဲ့သိပ်မစိမ်းပါဘူး။ ထွက်လာတော့မယ့် Fortnite နဲ့အပြိုင် PUBG ကရော ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေ ထွက်လာခဲ့ပြီလဲ??
မှန်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်တဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် PUBG က ပိုပြီးပေါ့ပါးတဲ့ PUBG Lite ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဒီ Lite ဗားရှင်းကို ဆော့လို့ရနေပါပြီ။
ဒီ Lite ဗားရှင်းမှာတော့ အရင်ဗားရှင်းလို Player အယောက် ၁၀၀ မဟုတ်တော့ဘဲ အယောက် ၄၀နဲ့ပဲကန့်သတ်ထားပါတယ်။ မြေပုံက 2km x 2km ဆိုတော့ နည်းနည်းပိုသေးသွားတဲ့အတွက် ပြေးတာတွေလျှော့ တိုက်ရမှာများလာမယ့်ပုံပါ။ (မြန်မြန်လည်းသေရင်သေသွားနိုင်တာပေါ့ )
လက်ရှိအချိန်မှာ Fortnite ဆော့လို့ရတဲ့ Android ဖုန်းဆိုလို့ Galaxy ဖုန်းတွေပဲရှိသေးတာဆိုတော့ Android ဖုန်းတွေဆီ သူရောက်မလာခင် PUBG အနေနဲ့ ဘတ်ဂျတ်ဖုန်း Mid-range ဖုန်းတွေမှာပါဆော့လို့ရအောင်လုပ်ပြီး scope ပိုချဲ့လာချင်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ အခု ဒီ Lite ဗားရှင်းကတော့ နိုင်ငံတိုင်းမှာမရသေးပေမယ့် မစောင့်နိုင်တော့ဘူး ဆော့ချင်နေပါပြီဆိုရင်တော့ အရင်အတိုင်း နည်းအသွယ်သွယ်နဲ့ ဟိုရှာဒီဖွေလုပ်ပြီး ဆော့လို့ရနေပြီဖြစ်ကြောင်း လက်တို့လိုက်ရင်း ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ TGIF ကို PUGB Lite လေးနဲ့ ၂ပါး ၄ပါးသွားနိုင်ကြပါစေလို့…
Ref: PUBG, SlashGear
ဒီတဈပတျ TGIF အတှကျက ဘာလေးဖွဈမယျထငျလဲ?? 樂樂樂
ဒီတဈပတျကတော့ ဘတျဂတျြဖုနျးသမားတှေ Mid-range ဖုနျးပိုငျရှငျတှေ ပြျောသှားစနေိုငျလောကျတဲ့ သတငျးလေးတဈခုပါလာပါပွီ။
အခုခြိနျအနနေဲ့ကွညျ့ရငျ Fortnite Android ကိုမြှျောနတေဲ့သူတှေ မနညျးမနောရှိမှာပါ။ အဲထဲကမှ Galaxy ဖုနျးပိုငျရှငျတှကေတော့ ကံထူးရှငျတှပေေါ့။ သူနဲ့အပွိုငျ PUBG ကတော့ Android ရော iOS အတှကျရောထှကျပွီးသားဖွဈတော့ Android သမားတှနေဲ့သိပျမစိမျးပါဘူး။ ထှကျလာတော့မယျ့ Fortnite နဲ့အပွိုငျ PUBG ကရော ဘယျလိုစိတျဝငျစားစရာတှေ ထှကျလာခဲ့ပွီလဲ??
မှနျပါတယျ။ စှမျးဆောငျရညျနိမျ့တဲ့ ဖုနျးတှအေတှကျ PUBG က ပိုပွီးပေါ့ပါးတဲ့ PUBG Lite ကို ထုတျပေးလိုကျပါပွီ။ တဈခြို့နိုငျငံတှမှောတော့ ဒီ Lite ဗားရှငျးကို ဆော့လို့ရနပေါပွီ။
ဒီ Lite ဗားရှငျးမှာတော့ အရငျဗားရှငျးလို Player အယောကျ ၁၀၀ မဟုတျတော့ဘဲ အယောကျ ၄၀နဲ့ပဲကနျ့သတျထားပါတယျ။ မွပေုံက 2km x 2km ဆိုတော့ နညျးနညျးပိုသေးသှားတဲ့အတှကျ ပွေးတာတှလြှေော့ တိုကျရမှာမြားလာမယျ့ပုံပါ။ (မွနျမွနျလညျးသရေငျသသှေားနိုငျတာပေါ့ )
လကျရှိအခြိနျမှာ Fortnite ဆော့လို့ရတဲ့ Android ဖုနျးဆိုလို့ Galaxy ဖုနျးတှပေဲရှိသေးတာဆိုတော့ Android ဖုနျးတှဆေီ သူရောကျမလာခငျ PUBG အနနေဲ့ ဘတျဂတျြဖုနျး Mid-range ဖုနျးတှမှောပါဆော့လို့ရအောငျလုပျပွီး scope ပိုခြဲ့လာခငျြတဲ့သဘောမြိုးပါပဲ။ အခု ဒီ Lite ဗားရှငျးကတော့ နိုငျငံတိုငျးမှာမရသေးပမေယျ့ မစောငျ့နိုငျတော့ဘူး ဆော့ခငျြနပေါပွီဆိုရငျတော့ အရငျအတိုငျး နညျးအသှယျသှယျနဲ့ ဟိုရှာဒီဖှလေုပျပွီး ဆော့လို့ရနပွေီဖွဈကွောငျး လကျတို့လိုကျရငျး ဒီတဈပတျရဲ့ TGIF ကို PUGB Lite လေးနဲ့ ၂ပါး ၄ပါးသှားနိုငျကွပါစလေို့…
Fortnite Android Beta ရရှိမယ့် ဖုန်းစာရင်းနှင့် Download ရယူနည်း